लेन मिच्नु भो ? घरमै फोन आउँछ, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
काठमाडौं। तपाईं सडकमा सवारी गुडाउँदा कसरी गुडाउनुहुन्छ ? लेनको पालना गर्नुहुन्छ वा हुन्न ? तर, अब सवारी चलाउँदा लेन मिचियो अथवा लेन अनुशासन पालना गर्नुभएन भने होस गर्नुस्, तपाईंको घरमा नै फोन बज्नेछ ।
हाल महाशाखासँग रहेका दुईवटा ‘सभिलेन्स भेइकल’लाई महाशाखाले आवश्यकतानुसार स्थान छनोट गरेर राख्ने गरेको छ । यसैगरी रानीपोखरीमा रहेको सीसीटिभी मोनिटरिङ रुम र ट्राफिक महाशाखाको मोनिटरिङ रुमले समेत सडकको अवस्थाको मोनिटरिङ गरिरहेको छ ।
महाशाखाको रेकर्डअनुसार हालसम्म ६३४ जना कारबाहीको दायरामा आएका छन् भने १६८ जनालाई कारबाहीका लागि चिठी काटिएको छ । यस्तै, २५९ जना कारबाहीको प्रक्रियामा छन् भने ८५३ सवारीको अभिलेख ट्राफिक प्रहरीले खोजिरहेको छ । राजधानी दैनिक